Ihe Mgbanwe Agbanwe
Home > Ngwaahịa > Ihe Mgbanwe Agbanwe (Total 13 Ngwaahịa maka Ihe Mgbanwe Agbanwe)
Ihe Mgbanwe Agbanwe - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ihe Mgbanwe Agbanwe manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ihe Mgbanwe Agbanwe na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ihe Mgbanwe Agbanwe na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Mkpụrụ Na-agbanwe Ntugharị Na-agba Mkpụrụ Na-agbanwe agbanwe
Tag: Akpa Ngwongwo nke Mmiri nke Mmiri nke Mmiri nke Mmiri nke Ala Mmiri , Akpa Njikere Ike Ike nke Na - agbanwe agbanwe , Akpa Mgbakwunye nke Na-agbanwe Ụdị Omume
Omenala mgbanwe anyanwụ na-atụgharị akpa mfe ibu. Ihe karịrị afọ 20 nke ndụ, bụ iji akwa mmiri na-adịghị mma ma nụchaa site na ịmị akwa ma bụrụ ezigbo ngwá ọrụ agha, onye ọ bụla agha mberede ngwa ngwa. A bara ezigbo uru. Egwuregwu n'èzí si na...
Anyanwụ na-ekpuchi ihu igwe na-agbanwe agbanwe
Tag: Ọpụpụ Ịgba Ọkụ n'èzí , Ike Rotary Light Projector , Igwe Igwe Uhie Na-enwusi Ike nke Na-enwu Ala N'uzo
Onye na-ahụ maka Rotary Light Rotary Light projector adopting design designation, oghere ndị dị na mbara igwe na ihe ndọtị oriọna na-agbanwe agbanwe, na-eme ka okpukpu ọkụ dịkwuo mma na ime mgbanwe. Isi oriọna ahụ bụ nke oriọna oriọna ọkụ, nke bụ...
Tag: 100W Agbanwe Ike Ngwá Ọrụ Ike , Mgbanwe Na-agbanwe Agbanwe N'èzí Panel Ike , Ogige igwe na-agbanye mgbidi
Ihe Mgbanwe Agbanwe akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ihe Mgbanwe Agbanwe ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ihe Mgbanwe Agbanwe kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ihe Mgbanwe Agbanwe wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.